မကြာခင်မှာ အာမက်ဒိုင်ယာလိုကြုံတွေ့ရတော့မယ့် စိန်ခေါ်မှုများ – FBV SPORT NEWS
မကြာခင်မှာ အာမက်ဒိုင်ယာလိုကြုံတွေ့ရတော့မယ့် စိန်ခေါ်မှုများ
ဂရင်းဝုဒ်ကလက်ရှိမှာ အကောင်းဆုံးပုံစံနဲ့ပွဲထွက်ခွင့်တွေရရှိထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် အဓိကအနေနဲ့ နောက်နွေမှာအာမက်ကြုံလာရနိုင်တဲ့ ပြဿနာတွေရှိနိုင်တယ်လို့ ဘောလုံးကျွမ်းကျင်သူတွေက သုံးသပ်ကြပါတယ်။
ဆယ်ကျော်သက်ကစားသမားတွေအနေနဲ့ကွင်းထဲမှာကြီးမားများပြားလှတဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်တွေထုတ်ပြဖို့ကခက်ခဲတတ်ပေမယ့် အာမက်ကတော့ သူ့ရရှိထားတဲ့အချိန်နည်းနည်းမှာ ကောင်းမွန်တဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တွေကိမိနစ်ပိုင်းအတွင်းမှာတင်လုပ်ပြထားပါတယ်.
အာမက်ကလက်ရှိထိကို မန်ချက်စတာယူနိက်တက်အသင်းအတွက် ပွဲ၂ပွဲမှာ ၃၈မိနစ်သာကစားထားရသေးပြီးတော့ ရီးရဲဆိုဆီဒက်ကို ဖေဖော်ရီဝါမှာရင်ဆိုင်တဲ့ပွဲမှာဆိုရင်လည်း သူရဲ့စကေးတွေ သူ့ရဲ့Talentတွေကိုထုတ်ပြထားနိုင်ပါတယ်။
အာမက်ကိုကျွမ်းကျင်သူတွေကNatural Talentရှိတဲ့ကစားသမားလို့ဆိုကြပြီး ပြီးခဲ့တဲ့နွေမှာ ယူနိက်တက်က ပေါင်၃၇သန်းနဲ့ အတ္တလန်တာကနေဝယ်ယူခဲ့တာပါ။
အာမက်ဟာသူ့ရဲ့ပထမဆုံးဂိုးကိုအေစီမီလန်အသင်းနဲ့ပွဲမှာစတင်ရရှိခဲ့ပြီးတော့ ပရီးမီးယားဂိဂ်ပွဲစဉ်တွေဖြစ်တဲ့ လက်စတာနဲ့ဝုဒ်ပွဲမှာလည်း ကောင်းကောင်းကစားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ယူနိက်တက်သရဲနီဟောင်းရော်နယ်ဒိုကိုလည်း ယူနိက်တက်တို့က ပြန်ခေါ်ယူဖို့ချိတ်ဆက်နေတာကြောင့် ခေါ်ယူမှုတွေအောင်မြင်ခဲ့ရင် ဆိုလ်းရှားအနေနဲ့ အာမက်ကိုတော့ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှ ပွဲကြီးကစားခွင့်ပေးဖို့မဖြစ်နိုင်သလောက်ပါပဲ။
အာမက်ဟာ ဝုဒ်နဲ့လက်စတာပွဲတွေမှာသူဘာလုပ်နိုင်မလဲဆိုတာ ကောင်းကောင်းပြသထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက် နောက်ရာသီမှာတော့ ဆိုလ်းရှားအတွက်လည်းစိန်ခေါ်မှုတွေရှိတဲ့ရာသီဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။
ယူနိက်တက်တို့ဟာ လူငယ်ကစားသမားတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ပယ်လစ်စထရီကို အာလာဗက်အသင်းကိုအဌားချခဲ့ပေမယ့် အာမက်ကိုတော့အဌားချဖို့လည်းအစီအစဉ်မရှိဘူးလို့ဆိုထားတဲ့အတွက် အာမက်အတွက်အရံခုံမှာအချိန်ဖြုန်းရမလား? ပွဲထွက်ခွင်အတွက်ဘယ်လိုအစီအစဉ်တွေလုပ်ပေးမလဲဆိုတာတော့စောင့်ကြည့်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါ့အပြင်ယူနိက်တက်တို့ရဲ့အဆိုးဝါးဆုံးခေါ်ယူမှုအဆင့်၂ချိတ်ခဲ့တဲ့ ဗန်ဒီဘီဟာဆိုရင်လည်း အေဂျက်မှာခြေစွမ်းပြခဲ့သလောက်ယူနိက်တက်မှာတော့ အရံခုံပေါ်မှာအချိန်တွေဖြုန်းနေခဲ့ရပြီးစိတ်ပျက်ဖွယ်ရာတွေနဲ့ကြုံနေရပါတယ်။
ကွင်းလယ်မှာပေါ့ဘာ ဖာနန်ဒက်တို့ကို မယှဉ်နိုင်တဲ့ဗန်ဒိဘိလို အဖြစ်မျိုး အာမက်ကြုံလာရနိုင်လားဆိုတာလည်း ဆိုလ်းရှားရဲ့
နောက်ရာသီမှာယူနိက်တက်မှာဖြစ်လာနိုင်စရာရှိတာတွေက ဆန်ချို ဂရင်းဝုဒ်မားကပ်ရှက်စ်ဖို့မာရှယ်ကာဗာနီစတဲ့ကစားသမား၆ယောက်အတွက်၃နေရာဖြစ်လာနိုင်တဲ့အနေအထားကလည်းရှိပါသေးတယ်။
အာမက်ကတော့ထူးခြားတဲ့ပင်ကိုယ်ကစားဟန်ရှိပြီး ပြိုင်ဖက်နောက်ခံကစားသမားတွေကို လှည့်စားနိင်တဲ့ မယုံကြည်နိုင်စရာကောင်းတဲ့သူ့အသက်အရွယ်နဲ့မလိုက်အောင်တည်ငြိမ်တဲ့ကစားသမားဖြစ်တဲ့အတွက် ယူနိက်တက်တို့အနေနဲ့ သူ့ရဲ့ရင့်ကျက်မှု ယုံကြည်မှု ကျွမ်းကျင်မှုတွေတိုးတက်လာဖို့ မှန်မှန်ကန်ကန်ဆောင်ရွက်နိုင်လိမ့်မလားဆိုတာတော့စောင့်ကြည့်ရတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။